Ahịa na Ahịa Uru nke Ahịa akpaaka | Martech Zone
Fraịde, Septemba 12, 2014 Fraịde, Septemba 12, 2014 Douglas Karr
Dabere na Ihe CSO, ụlọ ọrụ nwere ọgbọ tozuru etozu na usoro njikwa nwere a Onu ogugu 9.3% di elu maka ahia nweta. Nke a bụ ebe ahịa akpaaka nyiwe dị ka anyị haziri nzukọ na Ahịa enwewo mmetụta dị ịrịba ama na imeziwanye ma akụkọ na arụmọrụ nke ìgwè ndị na-eji Salesforce - inye a na-atụ anya inweta ngwọta akpaaka pipeline. Ọ bụghị naanị ahịa akpaaka na-enyere ndị nnọchi anya ire ahịa ka ha rụpụta ọrụ ma rụọ ọrụ nke ọma.
N'agbanyeghị na a na-ere ya ruo ọtụtụ afọ dịka ngwá ọrụ maka, nke ọma, ndị na-ere ahịa, akpaaka na-agbanwe ọdịdị nke ngalaba ahịa ọgbara ọhụrụ. Companlọ ọrụ ndị na-emejuputa ihe ngwọta maka otu ndị ahịa ha na-achọpụta n'oge na-adịghị anya na akpaaka gafere ókè ahịa. Ekwenyeghi? Asingrịba ihe nweta nke ọma site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10% ọ bụghị naanị na-etinye ego buru ibu na akpa ahịa gị, ọ na-agakwa ogologo ụzọ iji kwado mbọ ahịa na azụmaahịa, ma na-atụnye ụtụ dị ukwuu na arụmọrụ zuru oke nke usoro ahịa ụlọ ọrụ. Matt Wesson, gbaghara
Ahịa akpaaka na-eweta nghọta bara uru nye ndị ahịa gị nwere ike inyere onye na-ere ahịa aka ịghọta mkpa ndị ahịa. Kedu ka ha si nụ banyere ngwaahịa na ọrụ gị? Kedu data ha nyere n'ụdị na-ekwu maka iru eru ha dị ka onye ndu? Kedu isi okwu ha nyochara mgbe ha ruru na saịtị ahụ? Kedu mmekọrịta ha nwere site na mgbasa ozi mgbasa ozi? Kedu ozi ịntanetị ha debanyere aha na ya? Kedu peeji nke ha gara? Kedu akwụkwọ ọcha ha budatara ma ọ bụ mmemme ha debara aha ya?
Typedị ozi a nwere ike ịba uru dị ukwuu maka onye nnọchi anya ahịa iji kwadebe maka oku na-esote ha ma ọ bụ email na atụmanya ahụ. I nwedịrị ike dobe mbọ gị site na isi ndu ịchọta na imechi ụzọ ndị nwere ike ịbụ nnukwu ndị ahịa.
Tags: na-edu ọgụgụ isindu akaramgbagharapipeline ngwọtaatụmanya ngwọtaakpaaka ahịadashboard ahiaNkwado ire ahịapipeline ahịanyocha ahịasalesforce ngwaahịa akpaakaire ere